मरिसकेको हल्ला सुनेको साथीले अमेरिकाबाट इमेल गरेको कहिल्यै बिर्सन सक्दिन-ब्रजेश खनाल - MeroReport
मरिसकेको हल्ला सुनेको साथीले अमेरिकाबाट इमेल गरेको कहिल्यै बिर्सन सक्दिन-ब्रजेश खनाल
ब्रजेश खनाल, सायद लेखन, कलाकारिता, टेलिभिजनका दर्शक र रेडियोकर्मी सबैका निम्ति अपरिचित नाम होइन । रहरले नै डोर्‍याएर आफूले बैङ्कको जागीरदेखि लेखन हुँदै पत्रकारिता, अभिनय, टिभी र रेडियो कार्यक्रम निर्माण तथा प्रस्तुति गरेको उनी आफै बताउँछन् । अन्तत: उनलाई लागेको छ रे-उनी त मात्र लेखक पो हुन् ! अरुले असल मानिस भनेर चिनून् भन्ने बाहेक अर्थोक लोभ केही नरहेको उनको भनाई छ । बाँकी जीवनमा पनि लेख्दै जाने र के लेखेँ भन्ने कुरामा उत्तिकै सजग र सचेत रहने ब्रजेशको प्रतिबद्दता पनि छ । निरन्तरको साहित्य लेखनका अलावा नेपाल साप्ताहिकमा हरेक हप्ता स्तम्भकै रुपमा 'बाँया फन्को'मारिरहेका ब्रजेश सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । युवाहरुसंग धेरैजसोसंगत गर्न रुचाउने उनको बानीका कारण सोसल मिडियामा उनी सक्रिय मात्रै हैन, लोकप्रीय पनि छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै चिरपरिचित ब्रजेशलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसंगको कुराकानी :
सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा ब्लगरका रुपमा या त्यो भन्दा फरक केही?
ब्लग पनि ख्यालख्यालमा लेखनकै एउटा माध्यम भएकोले शुरु गरेको हूँ । अरु माध्यमका लागि लेख्दा शव्द, विचार, भावका केही मात्र भए पनि हदबन्दीमा बस्नु पर्छ । तर आफ्नो ब्लगमा उन्मुक्त भएर अभिव्यक्त हुन सकिन्छ । सामाजिक संजालमा पनि सन्तुलित, पूर्वाग्रहरहित र अरुले सानो ठानेर वास्ता नगरेका विषयहरुमाथि कलम चलाउने मान्छे भनेर चिनिन पाए म खुशी हुनेछु ।
तपाइले चलाउने ब्लगहरु कुनकुन हुन् ?
फोटोग्राफीमा रुचि भएकोले निकै पहिलेदेखि थुप्रै फोटाहरु खिचेको छु । तिमध्ये आफूलाई मन परेकाहरु सेयर गरौं कि भन्ने लागेर हालै 'frames' भन्ने शीर्षकमा khachyakk.blogspot.com बनाएको छु । तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेको छैन । पहिले ब्लगबाट शुरु गरेको थिएँ । पछि brazesh.com मा त्यसको गुँड सारेको हूँ । तर अहिले पनि brazesh.wordpress.com मा फाट्फुट्ट आगन्तुकहरु देखिरहेको हुन्छु ।
आफ्नो ब्लगमा कस्ता बिषयबस्तु र सामग्रीहरु राख्न बढी रुचाउनु हुन्छ, भनिदिनुस न !
ब्लगमा मैले लौ त भनौं भने, अहिले धेरैजसो नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ 'बायाँ फन्को'मा मैले उठाउने सानासाना सामाजिक विषयहरुका लेख नै राखेको छु । त्यस बाहेक पनि कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरुमा छापिइका लेख रचनाहरु राख्ने गरेको छु । तर पत्रपत्रिकामा लेख्दा स्पेसका कारण छोट्याइएका हुन्छन् । ब्लगमा चाहिँ असम्पादित रुपमा तिनलाई पढ्न पाइन्छ । कहिलेकहीं पत्रपत्रिकामा सम्पादकहरुले शीर्षकै परिवर्तन गरिदिएका हुन्छन् । ब्लगमा आफ्नै शीर्षकमा तिनलाई राख्ने गरेको हुन्छु । त्यस बाहेक नितान्त व्यक्तिगत रुपमा भोगेका र अनुभव गरेका अन्त अप्रकाशित कुराहरु अभिव्यक्त गर्न पनि ब्लग राम्रो साथी हुन्छ ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि र किन सुरु गर्नुभयो?
सन् २००८ बाट शुरु गरेको हूँ । ६ वर्ष भैसकेछ । किन भन्ने कुरा अघि पनि भनिसकेँ ।
कस्ता बिषयबस्तु तपाईंको ब्लगमा प्राथमिकतामा पर्छन्?
मैले अघि नै भनें नि, सबै कुरा पत्रपत्रिकामा छाप्न छपाउन सम्भव हुँदैन । फेरि ब्लग भनेको निकै छिटो निकै धेरै पाठकहरुसमक्ष पुग्न सकिने माध्यम पनि हो । तसर्थ आफूले व्यक्तिगत रुपमा भोगेका कुराहरु र आफ्नो दृष्टिकोण जस्ताको त्यस्तै व्यक्त गर्न पाइने हुनाले धेरैजसो भावनात्मक कुराहरु र सानातिना सामाजिक विषयहरु, जसले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ, मेरा रोजाइमा बढी पर्दछन् । कतिपय आफैलाई सोध्न मन लागेका प्रश्नहरु पनि ब्लगमा लेख्ने गर्छु ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छ नि, है?
यो कुरा चाहिँ एकदमै सत्य हो । निरन्तर ब्लगलाई समय दिन सक्नु पनि एउटा साधना नै हो । तर, कतिपय कारणले यो सम्भव हुँदैन । मैले नै विगत ६ वर्षमा बेलाबेला महीनौंसम्म केही अपडेट गर्न नसकेका उदाहरणहरु छन् ।
ब्लगिङ बाहेक तपाँइको अर्को रुचीको बिषय चाँही के हो?
फोटो खिच्न रहर लाग्छ ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
सोसल मेडियाले धेरै कुरामा क्रान्ति ल्याएको छ । अभिव्यक्ति र सूचनाको कुरामा त अविश्वसनीय फड्को मारेको छ यसले । लौत भनौं भने आजकल देशविदेशका कुनै पनि समाचारहरु म सबैभन्दा पहिले ट्विटरबाट पाइरहेको हुन्छु । फेसबुक त्यति धेरै चलाउन्न तर पनि आफ्ना साथीभाइरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहनका लागि त्यसले पनि सघाएको छ । सामाजिक संजाल एकदमै शक्तिशाली भएको छ । कुनै महत्वपूर्ण मुद्दामा जनमतको हिर नै उर्लन सक्छ यसबाट । मैले व्यवसाय प्रवर्द्धन देखि लिएर विचार सम्प्रेषणसम्मका लागि सामाजिक संजालको प्रयोग भैरहेको देखेको छु ।
अनि नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग?
समग्र रुपमा भन्ने हो भने सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । निकै प्रतिभाशाली मानिसहरुले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने अवसरहरु पाइरहेका छन् । हुन त कुनै पनि कुराका केही नकारात्मक पक्षहरु नहुने हैनन् । तसर्थ यसमा पनि होलान् । तर समग्रमा, बृहत्तर रुपमा त्यसको प्रयोग सकारात्मक हुन्जेल केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नुहुन्छ?
विशेष रुपमा यही भन्ने छैन । अरुले सेयर गरेका, सुझाव दिएका, ब्लगर अफ द विकमा छानिएका ब्लगहरु पढिरहेको हुन्छु ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता?
आचारसंहिता हरेक कुरामा चाहिने कुरा हो । तर जबर्जस्ती लादिएका आचारसंहिता भन्दा मानिसले स्वत:स्फूर्त रुपमा वोध गरेको अनुशासन महत्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले ब्लग गर्दा अरुको मानप्रतिष्ठा, व्यवसाय र गोप्यतालाई ठाडै आक्रमण नहोस् भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ खराब कुरा वा हानिकारक प्रवृत्तिालाई बचाउनुपर्छ भन्ने पनि हैन । तर प्रामाणिकता र तथ्य बिनाको गालीगलौज वा व्यक्तिगत ईवी साध्नका लागि यो माध्यमको दुरुपयोग हुन हुँदैन ।
अरुका ब्लगहरु हेर्दा आचारसंहिता कत्तिको पालना भएको पाउनुभएको छ?
एकदुइ अपवाद भनेका संसारमा हरेक कुरामा हुन्छन् । तर मैले अघि भनेजस्तो अधिकांश ब्लगरहरुलाई मैले सम्वेदनशील, गम्भीर र क्षमतावान नै देखेको छु ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइ दिनुस न !
मैले सिनेमाको लेखन थालेको बेलादेखि मेरो अरु सिर्जनात्मक र साहित्यिक लेखन पछि परिरहेको धेरै भैसकेको थियो । मेरो ब्लग पढेर नै नेपाल साप्ताहिकका सम्पादकले मलाई स्तम्भ लेख्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको र अवसर दिनुभएको हो । त्यसले मेरो लेखनलाई फेरि एकपटक मूलधारमा ल्याइदिएको हो । शुरुमा मेरा ब्लगका केही सामाग्रीहरुलाई माइसंसारले साभार गरिदिएको थियो । त्यसका प्रशस्त पाठकहरु विदेशमा भएका कारण निकै लामो समय देखि सम्पर्क छुटेका साथीहरुले मेरो लिंक भेट्टाएर सम्पर्कमा आए । एक जना त हामीले मरिसकेको भनेर हल्ला सुनेको साथीले अमेरिकाबाट इमेल गरेको कुरा म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । पछि हामी त्यो कुरा गरेर खूब हाँस्यौं ।
तपाइ सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
ब्लगले अलि लामालामा अभिव्यक्तिहरुका लागि स्थान दिएको छ । फेसबुक चाहिँ धेरैजसो साथीभाइ र परिवारको सम्पर्क थलोको रुपमा प्रयोग भएको देखेको छु । फोटो एल्वमको अर्र्काइभ जस्तै बनेको छ फेसबुक । ट्विटर चाहिँ सूचना, समाचार र विचार सम्प्रेषणको लागि बढी उपयुक्त छ । १४० क्यारेक्टरमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुँदा नियमित रुपमा ट्विट गर्दा यसले मान्छेलाई बढी सिर्जनशील बनाउँछ । कहिलेकहीं आफ्नो एउटा ट्विटबाटै प्रेरित भएर मैले आफ्नो स्तम्भ नै पनि बनाएको छु ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएका कत्तिको पाउनु भएको छ?
सामाजिक हितका कुराहरु, रुढीवाद, अन्धविश्वास र कुरीतिका बारेमा ब्लगहरुमा प्रशस्त लेखिएको पाएको छु ।
ब्लगिङलाइ कहिँकतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने थलो र ब्यक्तिको निजी मिडियाका रुपमा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ तर पनि यो अँझै काठमाण्डौ केन्द्रित मात्र भइरहेको छ र मोफसलमा ब्लगरहरु एकदमै कम छन भन्ने पनि गरिन्छ नि । किन होला?
ब्लग धेरै हदसम्म प्रविधि र इन्टरनेटको तीब्रता र सहज उपलव्धतामा भर पर्ने भएकोले केही प्रतिशत राजधानीको बढी दखल भएको हुनसक्छ ।
ब्लगिङलाइ केहीले नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त?
हो नि । यसमा तपाईं आफै रिपोर्टर, आफै सम्पादक, आफै लेखक, आफै प्रकाशक हुनुहुन्छ । यस अर्थमा भन्दा तपाईं वान म्यान आर्मी हुनुहुन्छ । तपाईंलाई कसैको कुनै बन्देज हुँदैन । असीमित अधिकार तपाईं आफैमा निहित हुन्छ । त्यसैले बिर्सन नहुने एउटै कुरा के हो भने, अधिकारसंगै जिम्मेवारी र कर्तब्य पनि आउँछ । त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।
नागरिक पत्रकारिताका लागि चेतना फैलाउन र ब्लगरहरुलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित प्रयोग गर्नका लागि तपाईंहरुले गरेको प्रयास सह्राहनीय छ र यो क्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्ने अनुरोध र शुभकामना छ ।
Comment by Prakash Lamichhane on April 23, 2014 at 9:39am
Congratulations !!!! Want to read more.....